မျက်စိပါဝါကို လေဆာနဲ့ ဖျောက်ရအောင် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မျက်စိပါဝါကို လေဆာနဲ့ ဖျောက်ရအောင်
ဇူလိုင် 25, 2019
မျက်စိပါဝါကို လေဆာနဲ့ဖျောက်ခြင်း ဆိုတာ ဒီကနေ့ အလွန်လူကြိုက်များနေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုသရေးနည်းပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ excimer laser ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပြီး အဝေးမှုန်၊ အနီးမှုန် နဲ့ hyperopic လို့ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါအနီးမှုန်ခြင်းမျိုးတွေ အပြင် သူငယ်အိမ်စောင်းတာ စတာတဲ့ မြင်မှုဆိုင်ရာ ပုံမမှန်မှုများကို ကုသပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံ (China Town) က The Lasik Center မှာ အဆိုပါ မျက်စိပါဝါပြဿနာများကို လေဆာနဲ့ဖျောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ အတွက် နောက်ဆုံးပေါ်စက်သစ်ကြီးဖြစ်တဲ့ 4th Generation Nidek Quest Generation Wavefront Laser ကို အသုံးပြုပြီး အဆင့်အမြင့်ဆုံးကုသမှုတွေကို ပေးဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Lasik နည်းပညာသုံး မျက်စိပါဝါဖျောက်ခြင်း – 4th Generation Nidek Quest Generation Wavefront Laser
Lasik အစားထိုး အသုံးပြုနိုင်မယ့် PRK (photorefractive keratectomy) နည်းစနစ်သုံး ပါဝါဖျောက်ခြင်း။
Assoc. Prof. Amporn Jongsareejit, M.D. ဦးဆောင်တဲ့ ဝါရင့်ကျွမ်းကျင် Lasik Medical Team
သင့်မျက်မှန်ကို အပြီးအပိုင် ချွတ်ပစ်လိုက်မယ့် Lasik နဲ့ PRK Lasik package များ
Lasik နည်းပညာသုံး မျက်စိပါဝါလေဆာဖျောက်ခြင်း Nidek Quest Generaton Wavefront laser
Lasik ဆိုတာ အဝေးမှုန်ခြင်း၊ မွေးရာပါအနီးမှုန်ခြင်း၊ သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်း စတာတွေအတွက် တစ်ကြိမ်တည်းနဲ့ အပြီး ခွဲစိတ်ကုသပေးတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ ခွဲမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဟာ microkeratome ကို အသုံးပြုပြီး မျက်စိရဲ့ မျက်ကြည်လွှာပေါ်မှာ အလွန်ပါးလွှာတဲ့ (မျက်ကြည်လွှာအထူရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ပဲ နက်တဲ့) အပေါ်ယံရှပ် ခွဲရာလေးကိုအရင်ဆုံး ပေးရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ခွာထားတဲ့ အဖတ်ကလေးကို လှန်ချလိုက်ပြီး မျက်ကြည်လွှာရဲ့ အလယ်လွှာ (stroma ဟု ခေါ်သည်) မှာရှိတဲ့ တစ်သျှူးအချို့ကို excimer laser နဲ့ ဖယ်ထုတ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ မျက်ကြည်လွှာကို ပြန်ပြီး ပုံသွင်း အချောကိုင်ပါတယ်။ လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ ကုသပြီးတဲ့အခါမှာတော့မျက်ကြည်လွှာဟာ အလင်းကို မြင်လွှာပေါ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ကျရောက် စေနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုနက လှန်ထားတဲ့ အဖတ်ကလေးကို ပြန်အုပ်ပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်း ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Lasik နည်းပညာဖြင့် ကုသမှု ခံယူရန် အသင့်တော်ဆုံးလူနာများ
Lasik နည်းပညာဖြင့် မျက်စိခွဲခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
Lasik နည်းပညာဖြင့် အမြင်သစ်ထူထောင်ခြင်း
Lasik နည်းပညာဖြင့် မျက်လုံး မခွဲမီ နှင့် ခွဲပြီး ကာလများအတွင်း ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် များ
အသက် ၁၈နှစ်အထက်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်း မျက်လုံးပါဝါ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်နေသူ။
လက်ရှိ မျက်ကြည်လွှာဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်သော keratoconus, မျက်လုံးအလွန်အမင်းခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အခြား မျက်လုံးရောဂါများဖြစ်သည့် အမြင်လွှာဗဟိုယိုယွင်းခြင်း (macular degeneration) နှင့် လတ်တေလော မျက်လုံးထိခိုက် ဒဏ်ရာရထားခြင်းများ စသည့် ခွဲစိတ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေသော အနှောက်အရှက်များ မရှိသူ။ အရေပြားလေးဘက်နာ (SLE) နှင့် အခြား ကိုယ်ခံစွမ်းအားချို့တဲ့သော ရောဂါ အခံများ မရှိသူ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များနှင့် နို့တိုက်မိခင်များ မသင့်လျော်သေးပါ။
Lasik eye surgery အကြောင်းကို သေသေချာချာရှင်းပြထားပြီး ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ပြီးသူများ။
မျက်စိဝေဒနာအတွက် တစ်ခါတည်းဖြင့်ပြီးသော ခွဲစိတ်ကုသမှု။
ခွဲစိတ်မှုအချိန်တို၊ အနာကျက်မြန်သည့်အပြင် ခဏအတွင်း ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်။
ခွဲပြီးသည်နှင့် ချက်ချင်း ကြည်လင်တဲ့ အမြင်ကို ရရှိ။
ချုပ်စရာမလို၊ ထုံဆေးထိုးရန်မလို၊ မျက်စဉ်းခပ်ရန်သာလိုအပ်။
Lasik ဖြင့် အမြင်သစ်ထူထောင်ခြင်း
မျက်မှန် / မျက်ကပ်မှန်များပေါ်တွင် မှီခိုနေရခြင်းမှ လွတ်မြောက် / လျော့နည်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
မျက်မှန်သမားမဟုတ်သူများမှ လျှောက်ထားနိုင်သော လေယာဉ်မှူး၊ လေယာဉ်မောင်မယ်၊ ရဲအရာရှိ စသည့် လုပ်ငန်းများ တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
မျက်မှန်/မျက်ကပ်မှန် ၏ တာဝန်ပို အလုပ်ရှုပ်မှုများကို မေ့ထားနိုင်ပြီး နေ့စဉ်ဘဝကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်း။
မိမိဝါသနာပါရာလုပ်ငန်းများ၊ အားကစားများ၊ ရေကူးခြင်း၊ ပြင်ပအားကစားလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို အကန့်အသတ်မရှိ လုပ်နိုင်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုများဖြင့် အားတက်နိုင်စေခြင်း။
Lasik အစားအသုံးပြုနိုင်မည့် PRK နည်းပညာအသစ်
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူနာဟာ Lasik နည်းလမ်းနဲ့ မျက်စိလေဆာပစ်ဖို့ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆရာဝန်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ PRK ဆိုတဲ့ နည်းပညာလည်း ရှိပါသေးတယ်။
PRK နည်းလမ်းနှင့် သင့်တော်သောလူနာများ
အဝေးမှုန်ခြင်းနှင့် သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်း ပါဝါ ၅၀၀ – ၆၀၀ ထက်မပိုသူများ။
မျက်ကြည်လွှာ တိုက်စားမှုဖြစ်ဖူးသူများ နှင့် ဖြစ်နေသူများ။
PRK နည်းလမ်းဖြင့် မျက်လုံးကုသခြင်းတစ်မျိုးတည်းကိုသာ လက်ခံသည့် ကန့်သတ်ချက်ရှိသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ရာထူးများနှင့် လေကြောင်းအရာရှိ ရာထူးနေရာများသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုမည့်သူများ။
ရေတိမ်ရှိနေခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်က PRK နည်းလမ်းဖြင့် ကုသရန်သင့်တော်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပေးထားသူများ။
မျက်ကြည်လွှာ ပုံမမှန်သူများ၊ မျက်ကြည်လွှာမျက်နှာပြင်ပုံမမှန်သူများ၊ မျက်ကြည်လွှာကို ခွဲ၍ လှန်ရန်မသင့်တော်သူများ။
PRK ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ပုံ
PRK ဆိုသည်မှာ အဝေးမှုန် myopia (nearsightedness), အနီးမှုန် hyperopia (farsightedness) နှင့် သူငယ်အိမ်စောင်း astigmatism သမားများအတွက် refrective surgery နည်းလမ်းဖြင့် ခွဲစိတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာ အပြင်ဆုံးအလွှာ (epithelium) အောက်မှ အလွှာကို တိုက်ရိုက် လိုအပ်သလို ပြုပြင်ကုသပေးနိုင်ဖို့ (epithelium) ကို အရင် ဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် အရေပြားပေါ်တွင် ပွန်းသွားသည့် ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် excimer laser ကို အသုံးပြုပြီး မျက်ကြည်လွှာကို ပြန်လည်ပုံဖော်အချောကိုင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် လူနာ၏ အမြင်အာရုံကို ပြုပြင်ပေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lasik မတိုင်မီ ဆယ်စုနှစ်များစွာကတည်းကစ၍ ယနေ့တိုင် အသုံးပြုနေသေးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
PRK ၏ ကောင်းကွက်များ
မျက်စိဝေဒနာများအတွက် တစ်ခါတည်းနှင့်အပြီး ကုသပေးနိုင်ခြင်း။
မျက်လုံးခြောက်သွေ့ခြင်းကို လျှော့ချနိုင်ပြီး မျက်လုံးအတွင်း ရေဓာတ် / မျက်ရည် နည်းသူများအတွက် သင့်လျော်။
ချုပ်ရိုးမလို၊ ထုံဆေးထိုးရန်မလို၊ မျက်စဉ်းခပ်ရန်သာ လို။
မျက်မှန် / မျက်ကပ်မှန်များပေါ်တွင်မှီခိုနေရခြင်းမှ ကင်းလွတ်/လျော့နည်းပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
မျက်မှန်သမားမဟုတ်သူများမှ လျှောက်ထားနိုင်သော လေယာဉ်မှူး၊ လေယာဉ်မောင်မယ်၊ ရဲအရာရှိ စသည့် လုပ်ငန်းများ တွင် ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမျာဖြင့် အားတက်နိုင်စေခြင်း။
ReLEx (refractive lenticule extraction) SMILE (small incision lenticule extraction) ဆိုသည်မှာ အဝေးမှုန်ခြင်း နှင့် သူငယ်အိမ်စောင်းသူများအတွက် လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး ကုသသည့် နည်းပညာ တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lasik နည်းပညာမှ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာသော နည်းပညာအသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လူနာအတွက် ကောင်းကျိုးများနှင့် ရလဒ်ကောင်းများ ရရှိနေပါတယ်။ Lasik ခွဲစိတ်မှုတွင် ဖြစ်လာနိုင်သေးသည့် အနည်းငယ်မျှသော ရှုပ်ထွေးမှုများကို ထပ်မံ လျှော့ချနိုင်သော နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။
ReLEx SMILE နည်လမ်းဖြင့် မျက်စိဝေဒနာများကို ဘယ်လိုကုသပေးမှာလဲ။
ReLEx SMILE နည်လမ်းဖြင့် မျက်စိဝေဒနာများကိုကုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးများကို ရရှိသလဲ။
ဘယ်လိုလူနာမျိုးတွေက ReLEx SMILE နည်လမ်းဖြင့် မျက်စိဝေဒနာများကို ကုသဖို့ သင့်တော်သလဲ။
ReLEx SMILE နည်လမ်းဖြင့် မျက်စိဝေဒနာများကို မကုသမီ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ။
ReLEx SMILE နည်လမ်းဖြင့် မျက်စိဝေဒနာများကို မကုသမီ ပြင်ဆင်ရန်များ။
ReLEx SMILE ဆိုသည်မှာ femtosecond laser လို့ခေါ်တဲ့ ultrafast အမျိုးအစား လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး မျက်စိဝေဒနာများကို ကုသပေးတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်အဖြစ်ဆုံး နည်းပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဟာ အဆိုပါလေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုပြီး -a lenticule- လို့ခေါ်တဲ့ မှန်ဘီလူးပုံစံ တစ်သျှူးအပိုင်းလေးကို မျက်ကြည်လွှာကနေ ခွဲထုတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေ 2-4mm လောက်ပဲရှိတဲ့ ခွဲရာ သေးသေးလေးကနေပီးတော့မှ lenticule ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ မျက်ကြည်လွှာကို ပုံစံမှန်အောင် ပြန် ပြုပြင်ပေးပြီး မျက်ကြည်လွှာပေါ် အလင်းကျရောက်မှု မှန် သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းမှာ ခွဲစိတ်မှုဟာ တကယ့်ကို သေးသေးလေး ဖြစ်ပြီးတော့ အနာကျက်လည်းအလွန်မြန်ပါတယ်။ မျက်ကြည်လွှာဆိုင်ရာ နာဗ်ကြောကို ထိခိုက်စေဖို့ အလွန် နည်းပါးတဲ့အတွက် မျက်လုံး ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ မျက်စိ နာကျင်ခြင်း စတာတွေဟာ သမားရိုးကျ Lasik ခွဲစိတ်မှုနဲ့ွယှဉ်လိုက်ရင် အလွန်နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ReLEx SMILE ခွဲစိတ်မှုဟာ အလွန်စေ့စပ်သေချာပြီး ကောင်းမှာ သေချာတဲ့အပြင် ပိုမိုကြည်လင်တဲ့ မျက်စိအမြင်ကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ ပြီးတော့ ခွဲစိတ်ပြီး တစ်ရက် နှစ်ရက်ဆိုရင်ကို ပုံမှန်အတိုင်း သွားလာ လှုပ်ရှားနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
ReLEX SMILE ၏ ကောင်းကွက်များ
မနာမကျင်တဲ့ ခွဲစိတ်မှု၊ Lasik ခွဲစိတ်မှုမှာလို မျက်ကြည်လွှာကို လှန်ထားစရာမလို တဲ့အတွက် ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မျက်လုံးနာကျင်မှု မရှိ။
Lasik နည်းလမ်းမှာလို မျက်ကြည်လွှာကို ပြန်ပြီး ဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပုံစံမကျမှာတို့ တွန့်နေမှာတို့ စိုးရိမ်စရာမလို
ReLEx SMILE သည် ဓား လုံး၀ မပါတဲ့ ခွဲစိတ်မှု ဖြစ်တဲ့အပြင် လုံးဝလည်း တိကျသပ်ရပ်ပါတယ်။
အဝေးမှုန်ခြင်းကို 1000 (-100.00D) အထိ၊ သူငယ်အိမ်စောင်းခြင်းကို 500 (-5.00D) အထိ ပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ReLEx SMILE ဟာ မျက်လုံးအမြင်အာရုံပြုပြင်ရာမှာ အဆန်းသစ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ထိုးဖောက်မှုအနည်းဆုံးခွဲစိတ်မှုဖြစ်လို့ မျက်ကြည်လွှာ အထူအပါးပြဿနာရှိတဲ့ လူနာတွေအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါတယ်။ ခွဲစိပ်မှုဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို များစွာ လျော့နည်းစေပြီး အချိန် အတိုဆုံးအတွင်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။
ReLEx SMILE နည်းလမ်းဖြင့် ကုသပေးဖို့ သင့်တော်တဲ့ လူနာများ
1000(-10.00D) ထက် မပိုတဲ့ အဝေးမှုန်ပါဝါရှိသူ ၊ 500 (-5.00 D) ထက် မပိုတဲ့ သူငယ်အိမ်စောင်း ပါဝါရှိသူ၊ အဝေးလည်းမှုန်၊ သူငယ်အိမ်လည်း စောင်းနေတဲ့သူ
အသက် ၂၀ နဲ့ အထက် ရှိသူများ၊ တစ်နှစ်အတွင်း ပါဝါအပြောင်းအလဲမရှိသူ / ၅၀ ထက်မပိုတဲ့ အပြောင်းအလဲသာ ရှိသူ။
အသက် ၅၅ နှစ်ထက် မကျော်သင့်ပါ။ (အသက် ၄၀ ကျော်များတွင် အသက်အရွယ်အရ မျက်စိမှုန်မှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ထိုသို့သောသူများအတွက် ရွေးစရာ ၂ လမ်းရှိပါတယ်။ ၁) အဝေးမှုန်အတွက် မျက်စိ နှစ်လုံးလုံးကို ခွဲပြီး အနီးကြည့်အတွက် မျက်မှန်တပ်ခြင်း။ ၂) မျက်လုံးတစ်လုံးကိုသာ ပုံမှန်အမြင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံးရအောင် ခွဲပေးပြီး အနီးကြည့်အတွက် ကျန်တစ်လုံးမှ ကူကြည့်ပေးစေခြင်း။ အဆိုပါနည်းလမ်း နှစ်မျိုးအနက် လူနာနဲ့ အဆင်အပြေဆုံး နည်းလမ်းကို ဆရာဝန်က ရွေးချယ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူနာမှာ severe dry eyes, keratoconus or macular degeneration စတဲ့ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေတဲ့ အခြား မျက်ကြည်လွှာဆိုင်ရာ ရောဂါများ ရှိမနေရပါဘူး။
လူနာမှာ ခွဲစိတ်မှုကို ထိခိုက်စေမယ့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားနည်းရောဂါ၊ SLE, rheumatoid arthritis, psoriasis သကြားဓာတ်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ ဆီးချို စတဲ့ ရောဂါတွေလည်း ရှိမနေရပါဘူး။
ဝက်ခြံလို မျက်နှာမှာ အဖုအပိန့်တွေအတွက်သောက်ရတဲ့ဆေးအုပ်စု roaccutane, acnotin or isotret, စတာတွေသောက်နေတာရှိရင် မျက်စိမခွဲခင် အနည်းဆုံး ၆ ပတ် ကြိုတင်ပြီး ဖြတ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ထပ်ပြောချင်တာကတော့ လူနာရဲ့ မျက်လုံးဟာ အဆိုပါ ခွဲစိတ်မှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာအထိ သန်စွမ်းကျန်းမာနေပါကြောင်းကို မျက်စိစမ်းသပ်ပေးတဲ့ဆရာဝန်က သေသေချာချာ စမ်းသပ် အတည်ပြု ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ReLEx SMILE ခွဲစိတ်မှု မပြုခင် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှုများ
ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူခင်မှာ လူနာဟာ မျက်စိဆရာဝန်ရဲ့ အသေးစိတ်စမ်းသပ်မှုကို ခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်မှုဟာ ၃ နာရီလောက် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး အောက်ပါ ဆန်းစစ်မှုတွေ ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။
မျက်စိဆရာဝန်မှ မျက်စိနှင့် အမြင်အာရုံ စမ်းသပ်ခြင်း
မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်မှ အမြင်အာရုံလွှာ အသေးစိတ် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း
Assoc.Prof. Amporn Jongsareejit, M.D.
– Established the Small Incision Cataract Surgery Society of the Royal College of Ophthalmologists of Thailand
– EstablishedaSpecialized Ophthalmology Center at the Metta International Eye Center (Wat Rai King) 1999-2004
– Co-authored the Small Incision Cataract Surgery (Manual Phaco) Textbook with Dr. Kamaljeet Singh as editor, India, 2001
– Received the Outstanding Research Award for Clinical Results of Phakic Refractive Lens (PRL) in Thailand at the APAO Congress 2003, Bangkok
– Nominated for the Mahidol B. Braun Award by the Royal College of Ophthalmologists of Thailand for 2003-2004
– Jointly presented the nucleus removal tube (Amporn tube) at the 2004 Inventions Exhibition of the National Research Council of Thailand
– First ophthalmologist in Asia to perform sutureless vitrectomy surgery
– First ophthalmologist in Asia to use the phakic refractive lens in the human eye
– Received the top award for presentation of the academic report on “Phakic refractive lens implantation in high myopic patients” at the 2006 Academic Conference of the Department of Medical Services
– Received the award for “Outstanding Contribution to Manual Small Incision Cataract Surgery” at the 1st International Manual Small Incision Cataract Surgery Conference 2015 in Pune, India
Lasik surgery မလုပ်ခင် မျက်လုံးစစ်ဆေးခြင်း 1,500 THB
PRK vision solutions at 50,000 THB
Lasik vision solutions at 54,000 THB (ခွဲစိတ်မှုကြာမြင့်ချိန် – ၂ – ၃ နာရီ)
ReLEx SMILE package at 120,000 THB
ဈေးနှုန်းများသည် မျက်လုံးနှစ်လုံးစလုံးအတွက်ဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်စမ်းသပ်ခ နှင့် မှန်ဘီလူးဖိုး နှင့် ဆေးရုံဝန်ဆောင်ခများ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဈေးနှုန်းများသည် ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံ (China town) တစ်ခုတွင်သာ ရရှိပါသည်။
o လေယာဉ်ကွင်း – ဟိုတည်
o ဟိုတည် – ဆေးရုံ
o ဆေးရုံ – ဟိုတည်
o ဟိုတည် – လေယာဉ်ကွင်း
ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံ (China Town) အနီးအနားရှိ ( ၃ကီလိုမီတာအတွင်း) ရှိသော ဟိုတည်များကို ဘိုကင်တင်ပေးခြင်း
Lasik Surgery အတွက် မခွဲမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဂရုတစိုက် ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ…
၁။ မျက်စိလေဆာပစ်မည့် နေ့ရက်ကို သတ်မှတ်ပြီး အတည်ပြုထားပါ။
၂။ ထိုနေ့တွင် ရေချိုး ခေါင်းလျှော်ပြီးမှ လာခဲ့ပါ။
၃။ ခွဲစိတ်မည့်နေ့တွင် မျက်နှာမှာ မိတ်ကပ်လူးခြင်း၊ အလှပြင်ခြင်း၊ အမွေးနံ့သာလိမ်းခြယ်ခဲ့ခြင်းများ မပြုလုပ်ခဲ့ပါနှင့်။
၄။ သက်သောင့်သက်သာ ချောင်ချိသော အဝတ်အစားမျိုး ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပါ။
၅။ မခွဲစိတ်မီ ၃ ရက်မှ စတင်ပြီး မျက်ကပ်မှန် ဖြုတ်ထားပါ။ (မျက်ကပ်မှန်အမာဆိုလျှင် ၇ ရက် ကြိုတင် ဖြုတ်ထားပါ။)
၆။ အစာပျော့ပျော့သာစားပါ။ အရက်မသောက်ရပါ။
၇။ ခွဲစိတ်ပြီးလျှင် အကူအညီရအောင် အဖော် တစ်ယောက်ယောက် ခေါ်ခဲ့ပါ။
၁။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် မျက်လုံးကို ၂၄ နာရီ အနားပေးထားပါ။
၂။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် နာခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ရှိပါက အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်နိုင်ပါသည်။ (ပါရာစီတမော ၂ လုံး ၄-၆ နာရီခြား)
၃။ မျက်စိကို လက်ဖြင့်မပွတ်ရ။ မျက်လုံးကာကို ၇ ရက်အထိ အိပ်ချိန်အပါအဝင် တပ်ထားပါ။
၄။ ခွဲစိတ်ပြီး ၇ ရက်အထိ ညစ်ပတ်သော၊ ဖုန်ထူသော၊ မီးခိုးရှိသောနေရာများနှင့် မသန့်သော ရေများ ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၅။ အဝတ်အစားလဲရာမှာ မျက်လုံးကို မထိမိအောင် ပွပွချောင်ချောင် ရင်ကွဲ အင်္ကျ ီများကိုသာ ဝတ်ပါ။ အနည်းဆုံး ၇ ရက် မျက်နှာ မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်း၊ အလှပြင်ခြင်းများ မလုပ်ရပါ။
၆။ ခွဲစိတ်ပြီး ၂ ရက်နောက်ပိုင်း ပုံမှန်အလုပ်များလုပ်နိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အခြား ပြင်းထန်သောအလုပ်များ လုပ်ခြင်းကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၇။ ခွဲစိတ်ပြီး တစ်ရက်၊ တစ်ပတ်၊ တစ်လ၊ ၆လ အစဉ်အတိုင်း ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသ စစ်ဆေးပါ။
မျက်စိထဲ ရေ မဝင်ပါစေနှင့်။
၁။ မျက်နှာသစ်ခြင်း – နူးညံ့သောအဝတ်စအစို ဖြင့် မျက်နှာကို ရေဖတ်တိုက်ပါ။ မျက်လုံးကို မထိရ။
၂။ မျက်စိသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း – မျက်စိမှိတ်ထားပြီး နော်မယ်ဆလိုင်းဆွတ်ထားသော ပိုးသတ်ထားသည့်ဂွမ်းလုံးကလေးဖြင့် မျက်ခွံများကို သန့်ရှင်းပါ။ (တစ်ရက် ၂ ကြိမ်)
၃။ ခေါင်းလျှော်ခြင်း – ဆိုင်မှာ သွားလျှောပါ။
ရေမကူးရ။ အပြင်ထွက်လျှင် နေကာမျက်မှန်တပ်ပြီး လေ နှင့် နေရောင်ခြည်တို့မှ ကာကွယ်ပါ။
၇ ရက်အထိ မျက်လုံးကို ရေမစိုစေရ။ ပိုးဝင်တတ်သည်။
မျက်လုံးအကာကို မနက်တိုင်း ဆပ်ပြာဖြင့် စင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။
ReLEx SMILE မခွဲမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း နှင့် ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဂရုတစိုက် ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
ReLEx SMILE မခွဲမီ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း
မျက်စဉ်းထည့်ရန် မျက်လုံးမခွဲမီ ၂နာရီကြိုတင်ရောက်လာပေးရန် ။
မခွဲမီ ခေါင်းကြိုတင်လျှော်လာပါရန် နှင့် ရေမွှေးဆွတ် လာခြင်း၊ မိတ်ကပ်များ (သို့) အလှပြင်ပစ္စည်းများသုံးလားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ကားမောင်းခြင်းမပြုရန်။ မိသားစုဝင်များမှ လာကြိုရန်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်အထိ လူနာမှာ မျက်လုံးကိုဖုံးထားရန်။ ဆေးရုံမှာ တစ်ညအိပ်ရန်မလိုပါ။
မျက်လုံးခွဲစိတ်ရန်ကြာချိန်မှာ မိနစ် ၃၀ သာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဂရုတစိုက် ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
မျက်လုံးခွဲစိတ်ပြီးနောက် နှစ်ပတ်အတွင်း မျက်လုံးပွတ်ခြင်း (သို့မဟုတ်)ဖျစ်ခြင်းကို ရှောင်ပါ။
ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ရုတ်တရက်မျက်လုံးမပွတ်မိစေရန်အတွက် မျက်လုံး အကာကို အနည်းဆုံးသုံးရက် ဝတ်ဆင်ပါ။
ခွဲစိတ်ပြီးတစ်ပတ်လောက် မျက်စိထဲကို ရေမဝင်စေရန် သတိပြုရန်။
မျက်စိဆရာဝန်မှ ညွှန်ထားသော မျက်စဉ်းကိုသာအသုံးပြုရန်။
မျက်စိကို အလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရန်။ အထူးသဖြင့် စာအုပ်ဖတ်ခြင်း၊ ဖုန်း (သို့) ကွန်ပြူတာအသုံးပြုခြင်း။
မျက်စိဆရာဝန်မှ ပေးထားသော ရက်ချိန်းများကို မပျက်မကွက်လာရောက်ရန်။
မျက်စိပါဝါကို လေဆာနဲ့ ဖျောက်ရအောင် မျက်စိပါဝါကို လေဆာနဲ့ဖျောက်ခြင်း ဆိုတာ ဒီကနေ့ အလွန်လူကြိုက်များနေတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကုသရေးနည်းပညာတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ excimer laser ရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပြီး အဝေးမှုန်၊ အနီးမှုန် နဲ့ hyperopic လို့ခေါ်တဲ့ မွေးရာပါအနီးမှုန်ခြင်းမျိုးတွေ အပြင် သူငယ်အိမ်စောင်းတာ စတာတဲ့
User rating: 3.70 out of5with 20 ratings